ဒေါက်တာ ဗိုက်ကလေး....၂: ဘဲဆိုရင်အရုပ်တောင်အလွတ်မပေးဘူး ဆိုတဲ့ ... အိသက်ပိုင် (မှော်ဘီ)ဒေါက်တာ ဗိုက်ကလေး
ဘဲဆိုရင်အရုပ်တောင်အလွတ်မပေးဘူး ဆိုတဲ့ ... အိသက်ပိုင် (မှော်ဘီ)
မိဘတွေကိုယ့်သားသမီးတွေကို သေသေချာချာ ဂရုစိုက် ဆုံး...
မသက်၇ဲ. အလှကို ပြတာနော် မဆဲ ကြနဲ.နော် သူနဲ. အိချော...
New Update ဒေါက်တာ ဗုိုက်ကလေး Blog ကုို...
ပါကင်ကိုမှ တောင်းဆိုနေတဲ့ ဘော်ဒါတွေအတွက်
AUSTIN TAYLOR-MANDINGO MASSACRE
အောက်က ပေါ်နေ သည်
မြန်မာ စစ်စစ် လေး
လူပြောများနေတဲ့ သန်လျင် GTC ကျောင်းထဲက အတွဲ Part 2...
လူပြောများနေတဲ့ သန်လျင် GTC ကျောင်းထဲက အတွဲ
ကိုယ် တိုင် ရိုက် လို့ ပြောတာပဲ
မနေနိုင်လို့ မဗိုက်ကို လေးဘက်ကုန်းခိုင်းလိုက်တယ်ဆိ...
ကဲ လာပြန်ပြီး GTC ပြီးတော့ ဆေးကျောင်းသူတဲ့
အကြာကြီးလိုးပေးနော် ဆုိုတဲ့ ..နှင်းနုနုနိုင်(မော်လ...
ရေဆေးမှ မှုတ်ပေးမယ်နော် (မြန်မာ)
အန်တီ၊ မမ တွေကို စိတ်တိုင်းကြိုက် ဖြစ်စေရမယ်လို့ ဆ...
စုပ်လို့ ကောင်းလိုက်တာမောင်လေးရဲ့ဆိုတဲ့ .. ဒေါ်ြ...
ပုသိမ် သူလေး သက်အိမွန်
အပျိုစင်ဆောက်ပတ်ကို ၈ပုန်းနဲ့ လဲလိုက်တဲ့ ..မျို...
ဘဲဆိုရင်အရုပ်တောင်အလွတ်မပေးဘူး ဆိုတဲ့ ... အိသက်ပို...
မြမြဝင်း(တိုက်ကြီး)..တစ်နေ့ ၂ ခါဇောင်းတိုက်ပါတယ်
နန်းအိ(တောင်ကြီး)..တစ်နေ့ ၂ ခါ အစိပွတ်ပါ ပွတ်ပါအစိ...
အမေ ကို သားဖြစ်သူမှ အဓမ္မပြုကျင့်မှု ဖြစ်ပွား
စင်ကာပူ ကမြန်မာတရုတ်မ တဲ့
ဘာမြင်ကြလဲ မမြင်ရင် ကန်းနေလို့
UPDATE HERE ဒေါက်တာ ဗုိုကကလေး Blog ကုို Andro...
မမ ပြမယ် ကြည့် နော်
ဖင် ပေါ်နေ သည်
ပဲခူးက အတွဲးလေးတည်းခိုခန်းမှာ ခိုးစားတယ်
လူပြောများနေတဲ့ သံလျင် GTC ဒုတိယပိုင်း
လူပြောများနေတဲ့ သံလျင် GTC ပထမပိုင်း
အထက်တန်းစာရေလား အောက်တန်းစားရေးလား တော့ မသိ ဘူး